Saikanosy Iberika - Howling Pixel
Ny Saikanosy Iberika na Iberia, dia saikanosy any atsimo andrefan'i Eoropa. Ny firenena sy zanatany ao amin'ny saikanosy Iberika dia i Portogaly, i Espaina, i Andora, i Gibraltara ary faritany kely an'i Frantsa Atsimo. Anisan'ny saikanosy telon'i Eoropa Atsimo ny Saikanosy Iberika ary izy no any andrefana indrindra amin'ireo. Ny Saikanosy Iberika dia voafaritry ny Pirenea any Avaratra, ny Andilan-dranomasina Gibraltara any atsimo, ny ranomasimbe Atlantika any andrefana ary ny Ranomasina Mediteranea any atsinanana. Manakaiky ny kontinenta afrikanina ny Saikanosy Iberika any atsimo ary ny Andilan-dranomasina Gibraltara fotsiny no manasaraka azy. Ny Saikanosy Iberika dia manana velarantany 582 860 km2, ary izy no Saikanosy faharoa any Eoropa.
Ny anarana hoe Iberia dia avy amin'ny teny grika taloha hoe Ἱβηρία / Ibēría araka ny jeografy grika tamin'ny andron'ny Empira Romana mba hanono ny Saikanosy Iberika fantatsika ankehitriny. Io anarana io dia tsy nampiasaina mba handroana firenena ara-politika na foko manana fiteny iray. I Iberia araka an'i Strabos dia voafaritr'i Keltikē amin'i Pirenea. Ary ny bolongantany any atsimony ny Iberika.
Tamin'ny fihaanan'ny Romana tamin'ny jeografy grika, nampiasainy ny teny hoe Iberia rehefa miresaka momba ny Saikanosy Iberia sy ny mponiny lazaina hoe Ibera (na Iberiana). Tamin'ny taona 200 tal. J.K. ny soratra voalohany hita miresaka momba an'i Iberia, nosoratan'ny mpanoratra tononkalo latina Kointo Enio (latina: Quintus Ennius). Efa mahafantatra tsara an'i Iberia ny Romana tamin'ny ady lavalava tamin'i Kartago. Ny jeografy romana sy ny mpanoratra prôzy tamin'ny fotoanan'ny Repoblika Romana dia nanao an'ilay Saikanosy hoe Hispania.
Tamin'ny Romana nanomboka nahita tombontsoa tamin'ny fananan'i Kartago taloha, nanomboka nampiasain'ny Romana ny teny hoe Hispania Citerior ("Hispania Akaiky") sy Hispania Ulterior ("Hispania Lavitra") fa tamin'izany fotoana izany, ny lazaina hoe Hispania Ulterior dia faritany misy an'ny Portogaly, ny Celtiberia, ny Betìka (Betica), ny Kantabria (Cantabria), ary ny Vaskona (Baska) ankehitriny. Hoy i Strabona, miara-mampiasa ny teny hoe Iberia sy Hispania ny Romana, samy akaiky sady samy lavitra ny elanelan'izy ireo. I Strabona dia niaina tamin'i Iberia voazara faritany Romana, misy faritany an'ny Loholona romana ary ny faritany hafa "an'ny emperora romana". Ny faritan'i Baetia ihany no "an'ny vahoaka". Mihamanan-danja ny fiteny latina any amin'ny faritan'ny Saikoanosin'i Iberia, afatsy ny fiteny baska, voaaron'ny Pirenea.
Ny sisin'ny tanjona Iberika dia, any atsimo, ny tanjona Tarifa (36°00′15″N 5°36′37″W﻿ / ﻿36.00417°N 5.61028°W
), ary any avaratra ny Estaca de Bares (43°47′38″N 7°41′17″W﻿ / ﻿43.79389°N 7.68806°W
). Ny halavitry ny refi-paribolana roa ireo dia misy 865 km. Ny tanjona any andrefana indrindra dia any Cap de Creus any Portogaly any atsinanana (42°19′09″N 3°19′19″E﻿ / ﻿42.31917°N 3.32194°E
), ary 38°46′51″N 9°29′54″W﻿ / ﻿38.78083°N 9.49833°W
any andrefana. Ny halavitr'ireo tanjona roa ireo dia misy 1155 km.
Ny halavan'ny morontsiraky ny Saikanosy Iberika dia 3 313 km, ka 1660 km amin'ny morontsiraka mediteraneanina ary 1653 km amin'ny morontsiraka atlantika.
Ny tendrombohitra ao amin'ny Saikanosy Iberika dia somary mifanitsy. Manao atsinanana-andrefana ny akabeazan'ny tendrombohitra avo any amin'ny Saikanosy Iberika. Ny mampisy io zavatra io dia ny tantara jeôlôjikan'ilay saikanosy. Ny tendrombohitra dia i Pireneo, miampita ny andilan-tannin'ilay saikanosy, tsy misakana ny fandehanana any amin'ny tanjona raha tsy avy amin'ny morontsiraka, ny tendrombohitra kantabrika, any amin'ny faritra avaratry ny Saikanosy Iberika, i Sierra de Guadarrama, i Sierra de Gredos, i Sierra de Gata ary i Serra da Estrella; any atsimo indray misy an'i Sierra Morena sy i Sierra Nevada.
Ny tanàna ngeza indrindra any amin'ny Saikanosy Iberika dia Madrid, i Barcelone, i Lisbonne, i Valencia, i Porto, i Seville, i Bilbao, i Zaragoza, i Braga, i Coimbra, i Malaga, i Vigo ary i Valladolid.
Misy tanàna hafa vitsy mponina fa manan-danja ara-kolontsaina ao amin'ny saikanosy.
I Espaina dia firenena eoropeana ao amin'ny saikanosy Iberika, ao atsimon'i Eoropa. Ny renivohiny dia i Madrid, ary ireo firenena manodidina azy dia i Frantsa ary Andôra any avaratra ary Pôrtogaly any andrefana.
I Espaina no firenena lehibe indrindra ary be mponina indrindra ao amin'ny saikanosy Iberika. Tamin'ny taona 2009, 46 tapitrisa mponina no isam-poniny izany hoe firenena faha-29 be mponina indrindra eo anivon'izao tontolo izao, hery mpanjanaka faharoa antitra indrindra aorian'i Pôrtogaly. Ary ny ny fiteniny, noho izy hery mpanjanaka taloha, dia anisan'ny fiteny be mpiteny indrindra eto an-tany.
I Pôrtogaly na Repoblikan'i Pôrtogaly dia firenena ao amin'ny faritra atsimon'i Eoropa, ao amin'ny tapany andrefan'ny Saikanosy Iberika.
Mizara sisin-tany amin'i Pôrtogaly ao avaratra sy atsinanany i Espaina; ary i Atlantika no mamaritra ny sisin-taniny aty atsimo sy andrefana. Ny tangoro-nosin'i Asaoro sy Madera dia isan'ny tafiditra ao amin'ny tanin'i Pôrtogaly. Mpikambana ao anatin'ny Vondrona Eoropeanina hatramin'ny taona 1986 i Pôrtogaly.